Ndingaite sei kuti ndidzore mameseji eTeregiramu - VidaBytes | LifeBytes
Ndine chokwadi kuti zvakamboitika kwauri wachinja foni yako, wanga usina backup uye warasa kwete chete hurukuro dzeTeregiramu chats, asi mafaera ese. vakagoverana mavari. Nguva zhinji, hatizvipi kukosha kwakanyanya, asi kana hurukuro idzi dzichisanganisira basa kana data remunhu kana zvinyorwa, zvinhu zvinonetsa.
Usanetseka, tiripo kuti tikubatsire padambudziko iri. Tiri kuzokupa nhevedzano yematanho uye matipi ekutevera kuti iwe utore mameseji kubva kuTelegraph account yako, pamwe chete nemashoko anokosha uye zvinyorwa.
Kana, kune rimwe divi, iwe uriwe wanga uchidzima chats dzega kubva pachikumbiro chimwe nechimwe uye ikozvino wave kuda kuvadzosa, iwe unozogona kuzviita. Teregiramu, inokupa iwe mukana wekudzima zvachose mameseji kana nhoroondo dzekutaura pasina kusiya. Kunyangwe aya mameseji atakasarudza kudzima iwe unozokwanisa kuadzosera. Gara uye tichatsanangura sei.
1 Chii chinonzi Telegraph application?
2 Maitiro ekudzoreredza mameseji eTeregiramu
2.1 gadzirisa bhatani
2.2 Mharidzo dzakachengetwa muTeregiramu
2.3 Tarisa cache yemudziyo wako
3 Maitiro ekuchengetedza Telegraph
Chii chinonzi Telegraph application?
Teregiramu, i Instant messaging application inowanikwa kune akasiyana madivayiri zvakadai seWindows, MacOs neLinux, pasina kukanganwa Android neIOS. Inowanikwa kune ese maturusi atinoshandisa muzuva redu. Kune avo vanofananidza iyi application neWhatsApp, nekuda kwekufanana kwayo uye kuti vane chinangwa chimwe chete.
Chinosiyanisa chimwe kubva kune chimwe ndechekuti Telegraph haidi nharembozha kuti ishande. Nekuda kweizvi, kuvanzika kwevashandisi vayo vese kunodzorwa. Zvakare, chinhu chakanaka ndechekuti iyo ruzivo rwakagovaniswa munhaurirano inochengetwa pamaseva eTeregiramu uye kwete pamudziyo.
Maitiro ekudzoreredza mameseji eTeregiramu
Muchikamu chino chaunozviwana iwe pachako, iwe uchave unokwanisa kuwana akasiyana maitiro aunokwanisa kuita dzora dzadzimwa kana kurasika dzeTeregiramu hurukuro uye mafaera.
Telegraph app, inokutendera kuti ugadzirise zvaunenge wadzima, uchiziva kana kusaziva. Ramba uchifunga kuti iwe unofanirwa kuita maitiro aya munguva pfupi pfupi inokwanisika kana wadzima mameseji kubva muhurukuro.
Paunoita sarudzo yekudzima chat zvachose, iwe uchaona a sarudzo ine mukana wekugadzirisa chiito ichocho kwemasekonzi mashoma. Kana ukadzvanya pane iro bhatani rekugadzirisa, unozogona kudzoreredza zvese mumasekonzi, mameseji uye mafaera pasina dambudziko.
Iwe unogona chete kuita maitiro aya mune iyo nzvimbo yenguva iyo application inoratidza iwe wakataura mukana pazasi pechidzitiro, une nguva inofungidzirwa inosvika masekonzi mashanu.
Muchiitiko chekuti iwe ukadzima meseji mukati memunhu chat, iwe uchave nemhinduro shoma. Chero zvazvingaitika, kana wagadzirira kubvisa chimwe chinhu kubva mukushandisa, izvi ichakubvunza kakawanda kana uchida kudzima zvirimo zvakadaro, kana zvakadaro, unofanira kungobvuma uye kumirira kuti ibviswe.
Mharidzo dzakachengetwa muTeregiramu
Chokwadi, pane kanopfuura chiitiko chimwe chete wakachengeta meseji usingazvizive. Iyi meseji app, Iyo ine yakavakirwa-mukati folda uko mameseji awakachengeta anochengetwa uye ayo aunogona kushandisa chero nguva.
Vazhinji vashandisi veTeregiramu havazive nezve iyi yakavanzika folda uye vanotenda kuti varasa mameseji avo. Hapana chikonzero chekunetseka zvakare, iwo mameseji haana kurasika, asi zvakachengetwa uye uchakwanisa kuzviwana, izvozvi tinokuudza kuti ungavadzosa sei.
Kuti uwane iwo, unofanirwa kuvhura iyo meseji application. Tevere, enda kumusoro kuruboshwe kwechidzitiro, kwaunopinza hwindo reprofile yako. Wobva wasarudza zita rako nenhamba, ona zita rako rekushandisa muapp. Mu inokudza girazi icon inoonekwa pachiratidziro chekutaura, nyora zita rekushandisa uye otomatiki, Teregiramu, inokuratidza folda yemameseji akachengetwa.
Tarisa cache yemudziyo wako
Kana iwe warasa kana kudzima faira, ingave multimedia kana mameseji, uye iwe uchida kuidzosera, iwe unofanirwa kutevedzera anotevera matanho. Kutanga, iwe unozofanirwa kuenda kune faira maneja wenharembozha yako. Tarisa iyo folda pasi pezita remudziyo wako, kana iri Android, folda ichava nezita rimwe chete.
Kana yangowanikwa, isarudze, iwane uye zvirimo. Mukati, unogona kuwana akasiyana maforodha uko yese cache yemaapplication akaiswa pamidziyo yako inochengetwa. Tsvaga iyo folda pasi pezita reTeregiramu, uye uwane mafaera ese akagovaniswa mukushandisa uye tsvaga iyo yawakadzima nekukanganisa.
Maitiro ekuchengetedza Telegraph
Iyi nzira yekuchengetedza yakati siyanei nezvatajaira kuona paWhatsApp. Iyo Telegraph application ine a chishandiso chinozotitendera kuchengetedza data rese rehurukuro dzedu mukombuta yedu.
Kuti ukwanise kuendesa kunze chats dzatakavhura muTeregiramu kuPC, chinhu chekutanga chaunofanira kuziva ndechekuti iwe unofanirwa kuve uine. yakaisa application pane desktop yemudziyo. Kana uchinge waiisa, iwe chete unayo pinda nenharembozha yako woisa kodhi iyo yakatumirwa kune imwe yemidziyo yako, kazhinji nharembozha.
Paunovhura app pakombuta yako, unozodzvanya pamenu inobuda kumusoro kuruboshwe kwechidzitiro, inozivikanwa seyo hamburger menyu. Kana wangodzvanya, menyu inoratidzwa uye iwe uchatsvaga iyo sarudzo yezvigadziriso.
Kana uchidzvanya pane zvigadziriso, hwindo rinobuda rinoonekwa rine sarudzo dzakasiyana. Pakati pese sarudzo idzi, iwe unofanirwa kusarudza iyo yepamusoro. Zvekare, chidzitiro chitsva chinovhura paunofanirwa kusarudza iyo "Export data kubva kuTeregiramu" sarudzo, mukati mechikamu che "Data uye kuchengetedza".
Sezvinowanzoitika kana uchigadzira backup, Iwe unofanirwa kuziva nezvese sarudzo dzinounzwa kwauri., sezvo zvichienderana nekuti wasarudza imwe kana imwe, kopi iyi ichave yakazara kana kushoma.
Sezvauri kuona mumufananidzo, kune akasiyana ekuchengetedza mikana, chete yakavanzika kana yemunhu chats, yakavanzika kana yeruzhinji mapoka, saizi yefaira, nezvimwe. Paunenge uine zvese uye kopi yapera, mafaera ese achachengetwa mudhawunirodha folda pasi pezita rekuti "Teregiramu Desktop".
Rangarira kuti kana pasina backup, haugone kudzoreredza hurukuro, kana mameseji akadzimwa kana mafaira emultimedia. Isu tinovimba kuti aya matipi ekutanga ekuti udzore mameseji eTeregiramu achakubatsira. Kana pane chero chiitiko chipi zvacho chemhosva dzakarapwa chikaitika kwauri, iwe unotoziva maitiro ekuita.
Yakazara nzira kuchinyorwa: HupenyuBytes » Applications » Ndingaite sei kuti ndidzore mameseji eTeregiramu